पञ्चेश्वर बाँधको विरोधमा हलचल ल्याएकाे कुमाउनी गीत (भिडियाेसहित)
२९ माघ २०५२ मा नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली सन्धि भयो । ४ असोज २०५३ संसद्‌बाट सन्धि बहुमतले पारित भए पनि यसको पक्ष र विपक्षको लफडा चर्किंदै गएर २१ फागुन २०५४ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) पार्टी फुट्यो । सन्धिको विरोधमा सडकमा चर्को नाराबाजीसमेत भयो ।
त्यसयता सन्दर्भवश कुरा निस्के पनि नेपालमा सन्धिको विरोध भने केही मत्थर देखिएको छ । भारतमा सन्धिको विरोध नभए पनि सन्धिअर्न्तगत निर्माण गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर बाँधको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
नेपाल-भारत सीमा रेखामा पर्ने महाकाली नदीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो बाँधले नेपालतर्फ बैतडी र दार्चुलाका केही क्षेत्र डुबानमा पर्नेछन् । भारतको चम्पावत, अल्मोडा र पिथौरागढ जिल्लाका अधिकांश भू-भाग डुबानमा पर्नेछन् ।
डुबान पर्ने क्षेत्रका भारतीय नागरिकहरू बाँधको चर्को विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरू कहिले सडक आन्दोलन, कहिले ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल, प्रदर्शन हुँदै गीतमा समेत बाँधको विरोध गर्न थालेका छन् । १ जनवरी २०२० मा भारतको उत्तराखण्डका गायक बीके सामन्तले बाँधको विरोधमा गाएको गीत ‘पञ्चेश्वर बाँध’ युट्युबमा अपलोड गरिएको छ ।
कुमाउनी भाषाको गीतमाथि उत्तराखण्डको ‘राज्य समीक्षा’ अनलाइन लेख्छ, ‘पहाडमा कैयौँ वर्षपछि यस्ता गीत गाइन्छ । गीतमा बाँध परियोजनाका ती पक्ष देखाइएका छन्, जसलाई नदेखेजस्तै गरिन्छ ।’
‘यो आरि उ पारि डुबी जाली थ्वाड दिनों का बाद.....
डांणां कांणां बाटा सब होलि बस रेत
न बास कोयल फिर न फुलली प्योली
न जा न जा यो भूमि छोडी, न जा न जा उ देश भाबर ।’
पञ्चेश्वर बाँधकाे नक्सा
भारतीय टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीका पत्रकार तथा पञ्चेश्वर बाँधसम्बन्धी वृत्तचित्र तयार गरेर भारतको प्रतिष्ठित पत्रकारिता अवार्ड रामनाथ गोयन्का अवार्ड पाएका सुशील बहुगुणा भन्छन्, ‘मित्रताको प्रतीक भनिने यो बाँधले नेपाल र भारतका धेरै मान्छेलाई रुवाउनेछ । धेरैलाई वर्षौंसम्म गरिबीको रसातलमा धकेल्नेछ ।’
१ किलोमिटर लामो बन्ने भनिएको यो बाँध हिमालयन क्षेत्रकै सबैभन्दा लामो र ठूलो हुनेछ । विद्युत् र सिँचाइका लागि निर्माण गर्न लागिएको बाँधका कारण नेपाल र भारतको गरेर १४ हजार हेक्टर जमिन प्रत्यक्ष डुबानमा पर्नेछ । डुबानमा नपरे पनि बाँकी हजारौँ हेक्टर प्रत्यक्ष जमिन प्रभावित हुनेछ । डुबान क्षेत्रबाट ८० हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित हुने बहुगुणाले आफ्नो रिपाेर्टमा बताएका छन् ।
महाकाली नदी र सरयु नदीको संगमभन्दा दुई किलोमिटर दक्षिणतर्फ बाँध निर्माण गर्ने तयारी थालिएको छ । बाँध निर्माण भएपछि बाँधबाट ६५ किलोमिटर माथिसम्म विशाल जलाशय तयार हुनेछ । सामन्तको गीतमा भनिएजस्तै बाँधले त्यस क्षेत्रका पहाड र जंगललाई पानी र बालुवामा परिणत गर्ने भय छ ।
पञ्चेश्वर जलाशयले पहाड (उत्तराखण्ड) वासीमा हलचल ल्याएको भन्छन् बहुगुणा । ‘यो बाँधले पहाडमा हलचल र चिन्ता जन्मिएको छ,’ उनी भन्छन् । पहाडवासीको चिन्ता र पीडा नै सामन्तको गीतमा व्यक्त गरिएको छ ।
भारत सरकारले बाँधका कारण विस्थापित हुनेहरूलाई पुनर्बासको योजना ल्याउने तयारी पनि गरेको छ । सरकारी योजनालाई प्रश्न गर्दै बहुगुणाको वृत्तचित्रमा एक महिला प्रश्न गर्छिन्, ‘बुढा पेड उखाड के दुसरी जगह लगाएगा तो क्या लगेगा ?’ अर्थात् बुढो रुख उखेलेर अन्त लगायो भने लाग्ला त ?
भारतले सन् १९५६ मै यो पञ्चेश्वर बाँध बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल-भारत सीमा रेखामा पर्ने महाकाली नदीमा बाँध बनाउनका लागि भारतले सन् १९७१ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार पार्‍याे ।
डीपीआरअनुसार, बाँधका कारण भारतका १ सय २२ र नेपालका ३३ गाउँ-बस्ती विस्थापित हुनेछन् । विस्थापित हुनेमा ६७ प्रतिशत भारतीय र ३३ प्रतिशत नेपाली हुनेछन् । ‘यो बाँधले एक पूरा समाज विस्थापित हुनेछ । करोडौँ रुख डुब्नेछन् । एक सिङ्गै इको सिस्टम कोल्याप्स हुनेछ,’ पर्यावरण विशेषज्ञ हिमाशुं ठक्कर द वायर डट इनसँग पञ्चेश्वर बाँधका विषयमा कुरा गर्दै भन्छन् । जति ठूलो बाँध निर्माण हुन्छ, त्यति मात्रामा पर्यावरणीय चक्र परिवर्तन हुने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् पर्यावरण विशेषज्ञ ।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको जलाशयको बाँध भने ३ सय १५ मिटर अग्लो हुनेछ । सन् २०१० मा इन्स्टिच्युट फर इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्सेज (आईईएस) का वैज्ञानिक मार्क एवरार्ड र गौरव कटारियाले गरेको अध्ययनअनुसार महाकाली नदीको पर्यावरणीय चक्रले दिने फाइदालाई बाँधको नाफासँग तुलना गर्दा परियोजनाबाट लाभको सट्टा हानि हुनेछ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू विराेध प्रदर्शनमा । तस्वीरः सुमित महत (द वायर)
बाँधले पर्यावरणी चक्र त बिथोल्ने नै छ । साथै, हिमालयन क्षेत्रको मौसमी चक्रमा समेत अनियममितता आउन सक्नेमा पर्यावरण विशेषज्ञहरूले चिन्ता गरिरहेका छन् ।
यिनै चिन्तामाझ स्थानीयवासी भने आफ्नो संस्कृति, घर, खेत विकासका नाममा नछाड्ने अड्डी कसिरहेका छन् । त्यही अडानको सिर्जनाका रूपमा सामन्तले गीत गाएको राज्यसभा अनलाइनले लेखेको छ ।
‘डुबी जाला घर द्वार डुबी जाला खेत
न बास कोयल फिर न फुलली प्योली....।’
प्रभावित क्षेत्रमा आज पनि सडक, शिक्षाजस्ता आधारभूत सुविधाको पर्खाइमा रहेका धेरै गाउँ छन् । कैयाैँ पिँढीको अथक परिश्रमले यहाँ गाउँ-बस्ती बसेका हुन् । लामो समयको चक्र पार गर्दै यी गाउँवासीले आजीविकाको चक्र बनाएका छन् ।
बहुगुणाको वृत्तचित्रमा एक पुरुष गहभरि आँसु जम्मा गरेर भन्छन, ‘हामीलाई बरु यही कालीको तालमा डुबाइदिनुहोस् । तर, यो ठाउँ छाड्दैनौँ ।’ सामन्तको गीतमा भनिएजस्तै बाँधले बनाउने जलाशयका कारण अब त्यस क्षेत्रमा फूल फुल्ने छैनन् । कोइलीले गीत गाउने छैनन् ।
महाकाली नदीबाट पानी​​​​ भर्दै महिला । तस्वीरः सुमित महत (द वायर)
द वायर डट इनमा मान्शि आशर लेख्छिन, ‘जीविका चलाउने आधारभूत प्रश्नसँगै नदी किनारको दुवैतर्फका मानिसको धार्मिक आस्थाको प्रश्न पनि उत्तिकै जब्बर छ ।’ बाँध निर्माणपछि पञ्चेश्वर, तालेश्वरसहित ५ सयभन्दा धेरै साना ठूला सांस्कृतिक धरोहर जलसमाधिमा जानेछन् ।
आशर अगाडि लेख्छिन्, ‘जीविकासँगै आस्था र इतिहासका मुद्दाहरूलाई लिएर महाकाली नदी तटमा विरोधको स्वर चर्को हुँदै छ । स्थानीयवासीका प्रश्नको जवाफबाट भाग्दै दुवै देश (नेपाल र भारत) का सरकार बाँध बनाउने हतारोमा लागे भने समयक्रममा स्थानीयका प्रश्न झन् संगिन भएर आउनेछन् ।’
विरोध र प्रश्नको गठजोड हो सामन्तको गीत । जसले बाँधबाट प्रभावित हुनेहरूलाई भावुक मात्र बनाउँदैन, प्रतिरोधमा उत्रिन पनि अनुरोध गर्छ । नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूमिमा प्रभावित हुने नागरिकका बारेमा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ कि !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस २३, २०७७, ०७:५६:००